30,000 tan oo ah soosaarka bacriminta xarunta - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Khadadka wax soo saarka sanadlaha ah ee 30,000 tan oo ah bacriminta isku dhafan ayaa isugu jira qalab casri ah. Qiimaha wax soo saarka oo hooseeya iyo waxsoosaarka wax soo saar sareeya. Khadadka wax soo saarka bacriminta ee isku jira waxaa loo isticmaali karaa isku dhafka alaabta ceeriin ee kala duwan. Ugu dambeyntiina, Bacriminta isku dhafan oo leh uruurinno iyo qaacido kala duwan ayaa loo diyaarin karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha dhabta ah, iyadoo si wax ku ool ah loo buuxiyo nafaqooyinka ay u baahan yihiin dalagyada, isla markaana xalliyaan khilaafaadka ka dhexeeya dalabka dalagga iyo bixinta ciidda.
Telefoon: + 86-18621801335
Sannadihii ugu dambeeyay, gobolku wuxuu dejiyay soona saaray siyaasado doorbid taxane ah oo lagu taageerayo horumarinta warshadaha bacriminta dabiiciga ah. Markasta oo ay sii badato baahida loo qabo cuntada dabiiciga ah, ayaa waxaa sii kordhaya baahida loo qabo. Kordhinta adeegsiga bacriminta dabiiciyan kaliya ma ahan un aasaasi ahaan in la yareeyo isticmaalka bacriminta kiimikada, laakiin sidoo kale waxay wanaajineysaa tayada dalagga iyo tartanka suuqa, waxayna muhiimad weyn u leedahay ka hortagga iyo xakamaynta wasakheynta ilaha aan dhibcaha lahayn iyo kor u qaadista keenista beeraha- dhinaca dib u habaynta qaabdhismeedka. Waqtigaan la joogo, shirkadaha ka ganacsada beekhaamintu waxay noqdeen isbeddel laga sameeyo bacriminta dabiiciga ah ee ka timaadda qashin saarka, kaliya uma baahna siyaasadaha ilaalinta deegaanka, laakiin sidoo kale waxay raadinayaan dhibco faa'iido cusub oo horumar waara mustaqbalka.
Awoodda wax soo saar ee khadadka wax soo saarka bacriminta yaryar ee dabiiciga ah way ka duwan tahay 500 kiilogaraam ilaa 1 tan saacaddii.
Qalabka ceyriinka ah ee loo heli karo soo saarista bacriminta dabiiciga ah
Qalabka ceyriinka ee soosaarka bacriminta isku jira waxaa ka mid ah urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, dareere ammonia, ammonium monophosphate, diammonium phosphate, potassium chloride, potassium sulfate, oo ay ku jiraan dhoobada qaar iyo buuxiyo kale.
1) Bacriminta nitrogen: ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonium thio, urea, calcium nitrate, iwm.
2) Bacriminta kaalshiyamka: potassium sulfate, cows iyo dambas, iwm.
3) Bacriminta fosfooraska: kalsiyum perphosphate, kalsiyum culus perphosphate, kalsiyum magnesium iyo bacriminta fosfateerka, fosfateerka budada, iwm.
Shaxda socodka khadka wax soo saarka
Maaddaama aan nahay soo saare xirfadle ah oo ah qalabka khadka wax soo saarka bacriminta, waxaan siinnaa macaamiisha qalabka wax soo saarka iyo xalka ugu habboon ee baahiyaha wax soo saar ee kala duwan sida 10,000 tan sanadkii illaa 200,000 tan sanadkii.
1. Qalabka ceyriinka ayaa si ballaaran loo waafajin karaa oo ku habboon kala-soocidda bacriminta isku-dhafan, daawada, warshadaha kiimikada, quudinta iyo alaabada kale ee ceyriinka ah, iyo heerka kala-soocidda alaabtu ay sarreyso.
2. Khatarta soosaarka waxay soo saari kartaa uruurinno kaladuwan, oo ay kamid yihiin bacriminta dabiiciga ah, bacriminta aan dabiici ahayn, bacriminta noolaha, bacriminta birlabta, iwm.) Bacriminta isku dhafan.
3. Qiimo jaban, adeeg aad u fiican. Warshadeenu waxay soo saartaa oo iska iibisaa kaligeed iib toos ah si ay u bixiso macaashka ugu badan ee macaamiisha ugu fiican. Intaas waxaa sii dheer, haddii macaamiisha ay leeyihiin dhibaatooyin farsamo ama su'aalo kulan, waxay sidoo kale nala soo xiriiri karaan waqtiga.
4. Bacriminta isku dhafan ee lagu soo saaray xariiqdan wax soo saar waxay leedahay mug yar oo nuugista qoyaanka, way fududahay in la keydiyo, waxayna si gaar ah ugu habboon tahay farsamaynta qalabka.
5. Qadka oo dhan soo saarista bacriminta waxay uruurisay sannado badan oo khibrad farsamo iyo karti wax soo saar ah. Kani waa khad soosaarida bacriminta isku-dhafan oo awood-yar oo la soo cusbooneysiiyay, wax laga beddelay lana qaabeeyay, si guul leh loogu xallinayo dhibaatooyinka waxtarka hooseeya iyo qiimaha sare ee gudaha iyo dibaddaba.
Nidaamka socodka ee khadka soo saarista bacriminta xarunta waxaa sida caadiga ah loo qaybin karaa: maaddooyinka ceyriinka, isku qasidda, qashin qallajinta, qallajinta, qaboojinta, kala saaridda walxaha, dahaadhka dhammaaday, iyo baakadaha ugu dambeeya ee dhammaaday.
1. Waxyaabaha maadada ceeriin:
Marka loo eego baahida suuqa iyo natiijooyinka go'aaminta ciidda maxalliga ah, urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium thiophosphate, ammonium phosphate, diammonium phosphate, calcium culus, potassium chloride (potassium sulfate) iyo alaabada kale ee ceyriin waxaa loo qaybiyaa qayb cayiman. Waxyaabaha lagu daro iyo walxaha raadraaca ayaa loo isticmaalaa inay yihiin maaddooyin ku jira saamiga suunka. Marka loo eego saamiga qaaciddada, dhammaan walxaha maaddooyinka ceyriinka ah si siman ayaa looga soo daadiyaa suumanka illaa kuwa wax lagu qaso, habka loo yaqaan 'premixes'. Waxay hubisaa saxsanaanta sameynta waxayna ogaataa maaddooyin hufan oo joogto ah oo wax ku ool ah.
2. Qalabka ceyriinka ah ee isku dhafan:
Mashiinka Horizontal waa qayb lagama maarmaan u ah wax soo saarka. Waxay ka caawineysaa alaabta ceyriinka inay si buuxda mar labaad isku milmaan waxayna aasaas u tahay wax-ku-oolnimada iyo tayada sare ee bacriminta granular. Waxaan soo saaraa hal-dhidib isku-qas ah oo jiifa iyo laba-dhidib bir-laaweyaal jiifa ah oo aan ka kala xusho.
Granulation waa qaybta ugu muhiimsan ee khadka soo saarista bacriminta xarunta. Xulashada granulator waa mid aad muhiim u ah. Warshadeenu waxay soo saartaa granulator disk, granulator durbaan, extruder rullaluistemadka ama granulator bacriminta xarunta cusub. Khadkan soo saarista bacriminta ee isku dhafan, waxaan ku dooranaynaa granulator durbaano wareegaya. Ka dib markii maaddada si siman loo qaso, xambaaraha suunka waxaa loo qaadaa mashiinka dhagxaanta durbaanka wareega si loo dhamaystiro kala-soocidda.
Qaboojinta ka dib, walxaha budada ah waxay ku sii jiraan sheyga la dhammeeyay. Dhammaan walxaha wanaagsan iyo kuwa waaweynba waxaa lagu baari karaa shaandheena duuban. Budada ganaaxa ee la baadhay ayaa laga soo qaadaa suunka xambaara gunta mashiinka wax lagu qaso si ay mar kale u walaaqdo alaabta ceyriinka ah si ay u samayso kala sooc; halka walxaha waaweyn ee aan buuxin heerka cabbirka ay u baahan yihiin in loo qaado si loo burburiyo silsilad wax lagu burburiyo ka hor intaan la soosaarin. Shayga la dhammeeyay waxaa loo qaadi doonaa mashiinka dahaadhka bacriminta xarunta. Tani waxay sameysaa wareeg wax soo saar dhameystiran.
Nidaamkani wuxuu qaataa mashiin tiro wax lagu rido oo baakidh ah. Mashiinka wuxuu ka kooban yahay mishiin si toos ah u miisaamaya, qalab wax lagu raro, mashiinka wax lagu xiro, iwm. Waxaad sidoo kale ku habeyn kartaa hiwaayad iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Waxay xaqiijin kartaa baakadaha tirada badan ee alaabada sida bacriminta dabiiciga ah iyo bacriminta isku dhafan, waxaana si weyn loogu isticmaalay warshadaha soo saara cuntada iyo khadadka wax soo saarka warshadaha.